[Kooxda Al-Shabaab] oo kulamo kala duwan ku qabteen Muqdisho
Friday March 08, 2019 - 03:08:48 in Wararka by Ali Adan
Waagacusub.com- Markii ugu horeeysay mudo laga joogo 6 sano ayaa Kooxda Al Shabaab hogaankooda dhexe waxey ku qabteen Muqadishu kulamo gaar gaar oo kala duwan. Kulamadaas ayaa waxey la yeesheen qaar ka mida ganacsatada ku ganacsadat Muqadisho, Oda
Waagacusub.com- Markii ugu horeeysay mudo laga joogo 6 sano ayaa Kooxda Al Shabaab hogaankooda dhexe waxey ku qabteen Muqadishu kulamo gaar gaar oo kala duwan. Kulamadaas ayaa waxey la yeesheen qaar ka mida ganacsatada ku ganacsadat Muqadisho, Oday dhaqameedyo iyo qaar ka mida hay'adaha gargaarka iyo kuwa nabadda ee ka howl gala Muqadisho. Mid ka mid dadkii ka qayb galay kulankaas ayaa sheegay in Kooxda Al Shabaab oo aysan ka muuqan wax cabsi iyo wal-wal ay ku qabteen shir guri ku yaalay xaafada Hodon ee Goboolka Banaadir.
Kulanka ayaa looga hadlay in Al Shabaab isbadal ku sameeyeen qaabka ay uga howl gasho Muqdisho taas oo ay ku muujinaayeen iney bartilmaamedsanayaan oo kaliya Waxey ku sheegeen " Kooxaha Mujirimiinta” ee u shaqeeya dowlada iyo ganacsatada la shaqeysta dowlad Fedaraalka laakiin ay Muqdisho ka joojin doonaan wax la yiraahdo dilalka qorsheeysan oo ay ayagu horay u fulin jireen.
Dhanka Kale Kooxda Al Shabaab ayaa kordhisay lacagaha canshuraha oo ay bixiyaan dhamaan gacansadata ka howl gasho guud ahaan magaalada Muqadisho oo ay ku jiro deegaanada ay ka taliso dowlada iyada oo ku sheegay korarkaas in uu la xiiro korordha howlagalada ay ku bartilmaameysanayaan dowlada Federaalka iyo dadka u shaqeeya.
Kooxda Argagixisada ee Al Shabaab ayaa doonayo in ay taageero ka helaan shacabka ku dhaqan Muqdisho iyagoo fursad u helay in ay ku dhex milmaan shacabka Muqdisho.
Talabadaan ay qaaday kooxda Al-Shabaab waxay walwal dheeraad ah galinaysaa shacabka iyo ganacsatada ku dhaqan Gobolka Banadir. Hadii aysan dowlada Farmaajo ka hortegin.
Waxaan shaki ku jirin in Amaanka Muqdisho uu ka sii dari doono maalmaha iyo bilaha soo socdo marba hadii Kooxda Al Shabaab ay shirar ku qabanayaan maalin cad deeganadda ay dowlada ka taliso.
Dhanka kale waxaa khatar ku jira nolosha dadka naftood hurayaasha ah ee u shaqeeya dowlada sida Xildhibanada iyo shaqaalah guud ee dowlada ee aan haysanin ciidan u gaar ah oo ilaaliya.